Hatramin’ny Taona 2016, Nohelohin’ny Fitsarana ao Myanmar Daholo Ny 100%-n’ny Olona Voampangan’ny Lalànan’ny Fifandraisandavitra 66 (d) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Febroary 2018 5:19 GMT
Mpanao gazety Wunna Tun (ankavia) miresadresaka amin'ilay poeta sady mpikatroka Maung Saungkha nandritra ny Forum momba ny Zo Nomerika 2018 tao Myanmar.
Tamin'ny taona 2016-17, voaheloka sy voasazy higadra an-tranomaizina ny olona rehetra voampanga teo ambany ny Fizarana 66(d) momba ny lalàna mifehy ny fifandraisan-davitra ao Myanmar.
Ny fizarana faha-66 (d) malaza dia mamaritra sazy telo taona an-tranomaizina noho ny “fanaovana an-ditra, fanerena, fanakanana tsy ara-drariny, fanalam-baraka, fanelingelenana, mampisy fiantraikany amin'ny fomba tsy ara-dalàna na mandrahona olona mampiasa tambajotra fifandraisan-davitra.”
Mampiseho ny fikarohana vaovao avy amin'ny Free Expression Myanmar (FEM), fikambanana tsy miankina iray ao an-toerana fa ny fampiasana ny Fizarana faha-66 (d) dia niteraka taham-piampangana 100 isan-jato ary tsy mifandanja loatra ny sazy navoaka tamin'ny lalàna. “Nanome sazy an-tranomaizina avokoa ny fitsarana tsirairay ary tsy nisy nanome onitra”, hoy ny vondrona tamin'ny tatitra mitondra ny lohateny hoe “66 D: Tsy Misy Tena Fiovana”.
Nanara-maso tranga 106 nanomboka tamin'ny Novambra 2015 ka hatramin'ny Novambra 2017 ny tatitra avy amin'ny FEM, nahita fa nisy fitomboana ny isan'ireo tranga hatramin'ny nitondran'ny Ligy Nasionaly ho an'ny Demaokrasia (NLD) tamin'ny taona 2016. Ny NLD dia tarihin'ilay nahazo ny loka Nobel, Aung Sang Suu Kyi, izay nitsikera ny governemanta tarihin'ny miaramila nandritra ny taona maro ho manafoana ny fahalalahana miteny ao amin'ny firenena.
Ohatra lehibe iray amin'ny fampiasan'ny manampahefana ao an-toerana ny fizarana faha-66 (d) mba hanorisorenana ny haino aman-jery ny raharaha Wunna Tun avy ao amin'ny Feo Demaokratikan'i Burma. Raha niasa nanao fanadihadiana momba ny tsy fanarahan-dàlana amin'ny fampindramam-bola amin'ny fitarihan-drano ho an'ny tantsaha ao amin'ny faritr'i Bago izy dia nampangain'ny ny manam-pahefana ao an-tanàna ho nanao kolikoly sy nizara vaovao tsy marina.
Raharaha Fizarana faha-66 (d) hafa ny mahakasika n'i Swe Win, tonian-dahatsoratra ao amin'ny Myanmar Now, izay nosamborina noho ny fitoriana napetraky ny mpikambana iray ao amin'ny hetsika nasionalista hiringiriny Ma Ba Tha noho ny lahatsoratra tao amin'ny Facebook izay nilazany fa ny mpitarika ny hetsika, U Wirathu dia tokony horoahina tsy ho moanina noho ny fiderana ny famonoana ny mpanolotsaina ara-pitsarana an'ny NLD Ko Ni. Mpitarika ara-politika Miozolomana malaza tsy dia fahita firy ao Myanmar maro an'isa Bodista i Ko Ni.
Voampanga ihany koa ilay mpikaroka lehibe ao amin'ny FEM, Maung Saungkha noho ny fandikàna ny Fizarana faha-66 (d). Nizara ny famintinana ny raharahany ity poeta malaza sady mpikatroka ara-tsosialy ity :
Nosamborin'ny governemanta aho ary nampidiriny am-ponja satria nanoratra tononkalo momba ny filoha tao amin'ny Facebook. Satria tsy maintsy miatrika ny fitsarana ahy tany am-ponja aho, dia tena very tanteraka aho. Enim-bolana an-tranomaizina ny sazy. Satria efa nijanona fito volana tany am-ponja aho, navotsotra avy hatrany aho taorian'ny sazy.
Ao anatin'ny tononkalo, manoritsoritra fa manana ny sarin'ny filoha tsy voatonona anarana misy tombo-kavatsa ao amin'ny taovam-pananahany ny mpitantara.
Voampanga teo ambany ny fizarana faha-66 (d) momba ny Lalàna mifehy ny Fifandraisan-davitra sy ny fizarana faha- 505(b) momba ny fehezan-dalàna famaizana i Saungkha. Mbola mijoro ho an'ny zony maha mpanakanto sy maha-poety azy izy ary mitarika fanentanana hanafoanana ny fizarana faha-66 (d).
Araka ny filazany, nanamafy ny ahiahy ny tatitra avy amin'ny FEM fa tsy ampy ny fiovana natao tamin'ny lalàna tamin'ny taona 2017.
Ao anatin'ity fikarohana ity no ahafahako mamela ny vahoaka hahafantatra fa mbola misy ireo tranga izay voampanga ao anatin'ny 66D ary mbola voafetra ihany ny fahafahana maneho hevitra eto amin'ny firenena.
Manamarika ny tatitra fa nofaritana manjavozavo sy teritery ireo fehezan-dalàna maromaro ao amin'ny lalàna ka lasa samy hafa ny fandraisana azy. Ohatra: ny fizarana faha-66 (d) dia tsy mamaritra mazava tsara hoe inona no hetsika lazaina fa “manakorontana”, na “miteraka fiantraikany tsy ara-dalàna.”
Nanazava ny fomba fanohintohinan'ny lalàna ny fahalalahana maneho hevitra ny Hetsika Birmana – UK :
Nampiasaina be loatra izany mba hanenjehana mpanao gazety sy mpikatroka. Ny sasany amin'ireo media aza dia nandà tsy hamoaka lahatsoratra izay mitsikera ny miaramila na ny governemanta mba hisorohana ny fitoriana sy ny fanagadrana. Mametraka fanaraha-maso toy izany amin'ny haino aman-jery ny lalàna ka mitarika sivana ataon'ny tena manokana. Toa hita ihany koa fa mahita ny Fizarana 66 (d) fa ilaina hanakanana ny tsikera atao amin'ny governemanta ireo mpitarika NLD sasany.
Naneho hevitra ny Human Rights Watch fa “nanokatra varavarana ho an'ny onjam-panenjehana heloka bevava ho an'ireo olona noho ny fifandraisana am-pilaminana ao amin'ny Facebook ny lalàna ary nampiasaina hatrany mba hanampenam-bava ny tsikera atao amin'ny manampahefana.”
Napetraka ny Free Expression Myanmar (fanehoan-kevitra malalaka Myanmar), vondrona iray mpiaro ny zon'olombelona nitarika fikambanana fiarahamonina sivily vaovao mikendry hanohitra ny Lalàna mifehy ny Fifandraisandavitra, sy manohana ny fanafoanana ny Fizarana faha-66 (d).
Anisan'ny mampiroborobo ny hetsika ihany koa ny tambajotran'ny fiarahamonim-pirenena vaovao antsoina hoe Hetsika ho Fanavaozana ny Lalànan'ny Fifandraisandavitra sy ny Fanafoanana ny Fizarana faha-66 (d). Mba hanentanana momba ny olana, nanangana tranonkala vaovao ahitana tahirin-kevitra momba ny fizarana 66 (d) rehetra ny vondrona.
21 ora izayMyanmar (Birmania)